Ny lalao zazavavy 6 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Aaron Rivas | 30/06/2021 23:45 | Lalao Android
Izahay indray dia mitondra lahatsoratra fanangonana iray hafa ho an'ny Android. Ity indray dia anjaran'ny zazavavy, ary noho izany dia nanangona ny kilalao zazavavy tsara indrindra ao amin'ny Google Play Store izahay.
Amin'ity fanangonana ity dia hanoratra sy hanazava anao izahay ny lalao zazavavy tsara indrindra ho an'ny Android, izay natao indrindra ho an'ny zazavavy sy ny tanora. Ny lalao rehetra ho hitanao etsy ambany dia maimaim-poana, ary koa ny malaza indrindra sy alaina ao amin'ny sokajy misy azy ireo.
Eto izahay dia mitanisa andiana lalao zazavavy tsara indrindra ho an'ny telefaona Android. Ilaina ny manasongadina indray, toy ny fanaontsika hatrany, izany Maimaimpoana ny lalao rehetra ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra. Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola ao anaty, ahafahana miditra amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa loka, valisoa, fanampiana ary maro hafa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatona azy.
1 Fiantsenana adala miaraka amin'ireo tovovavy manankarena - Lalao lamaody
2 Mpinamana tsara indrindra amin'ny lisea: ekipa zazavavy
3 Lalao Frippa ho an'ny zazavavy
4 Tantara Hollywood: lamaody ikona
5 Fanaviana nahandro - Lalao Chef
6 Cooking City - lalao fisakafoanana sy fandrahoan-tsakafo
Fiantsenana adala miaraka amin'ireo tovovavy manankarena - Lalao lamaody
Alao an-tsaina izany hoe zazavavy manam-bola be handanianao akanjo, akanjo, akanjo ary kiraro izany. Amin'ity lalao ity dia azonao atao ny miseho ho iray ary manatanteraka ny nofinofisinao ho zazavavy milionera miaraka amin'ny fahafaha-manao rehetra eto amin'izao tontolo izao hividy izay rehetra apetraka eo alohanao. Ao amin'ny tontolon'ny Crazy Shopping miaraka amin'ny tovovavy manankarena dia azonao atao ny manatanteraka izay tadiavinao rehetra ary misafidy amin'ireo zazavavy 6 misy amin'ny lalao.
Azonao atao ny misafidy kojakoja marobe hampiakanjo ny zazavavinao araka ny itiavanao azy. Aza misalasala mitafy azy na izany aza tadiavinao, toy ny ataonao amin'ny tena fiainana raha manana ny vola rehetra anananao amin'ny lalao ianao. Ento any amin'ny mpanao volo koa izy ireo ary mifidiana amin'ny taovolo sy fomba maro. Ny zavatra rehetra dia azo atao eo amin'ny tontolon'ny Crazy Shopping miaraka amin'ny tovovavy manankarena. Mahaiza manery araka izay itiavanao azy ary miaina fiainana mihaja, hatrany amin'ny magazay.
Fiantsenana goavambe miaraka amin'ireo tovovavy manankarena - Lalao lamaody
Developer: Lalao amin'ny lamaody ho an'ny zazavavy
Mpinamana tsara indrindra amin'ny lisea: ekipa zazavavy
Lalao style iray hafa ho an'ny zazavavy ity ahafahanao manamboatra ny toetranao ary mampody azy ireo ho toy ny divas rehetra. Manana namana roa akaiky indrindra ianao izay miaina amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ary anisan'ny be mpitia indrindra. Ireo dia maniry ny ho tsara tarehy indrindra ary, noho izany, tsy maintsy ampitafinao ho toy ny mpanjakavavy tadiaviny izy ireo.
Azonao atao ny misafidy safidy mariazy sy endrika endrika, pataloha, akanjo, tampony, palitao, palitao, zipo, satroka, taovolo ary kojakoja toa ny scarf sy solomaso, sns.
Afaka manandrana fomba maro isan-karazany amin'ity lalao ity ianao. Andramo ny maha-mpianatra marani-tsaina anao amin'ny fijery mpandala ny nentin-drazana sy voatokana, manao fehin-kibo sy solomaso, ohatra, na ho tovovavy manana fomba sassy te-handray an'izao tontolo izao. Ny sary an-tsaina ihany no fetra.
Developer: Fombafomba vetaveta mivory
Lalao Frippa ho an'ny zazavavy
Frippa dia manana lalao zazavavy maromaro ianao ao anatin'ny iray. Amin'ity lohateny ity dia azonao atao ny mitafy ny toetranao araka ny itiavanao azy, amin'ny akanjo, akanjo, kojakoja, akanjo ary maro hafa. Alao sary an-tsaina izany, ianao no mamorona azy. Ataovy toy ny mpanjakavavy ny zazavavinao, miaraka amin'ireo karazany rehetra izay ao amin'ny magazay sy ny katalaogin'ity lalao ity. Mividiana entana glamorous maro ho an'ny toetranao ary ampamirapirato izy.
Amin'ny lafiny iray, azonao atao ny mitondra azy any amin'ny mpanao volo ary ataovy ny fanapahana sy taovolo tianao indrindra, mba hahamendrika azy amin'ny hetsika ambony na amin'ny karazany hafa. Azonao atao koa ny mahandro amin'ny lalao ity; milalao ny andraikitry ny chef ary manomana lovia sy fomba fahandro matsiro sy azo ampiharina. Ny zavatra hafa dia afaka mampiasa akanjo maro ianao, raha tianao izany. Akanjo ho an'ny Halloween ny zazavavinao na fety, hetsika na daty hafa.
Miasa ity lalao ity raha tsy misy fifandraisana Internet, mba hahafahanao milalao azy io na aiza na aiza ary amin'ny fotoana rehetra. Mandritra izany fotoana izany, dia iray amin'ireo alaina be indrindra amin'ny karazany, miaraka amin'ny fisintomana maherin'ny 10 tapitrisa ao amin'ny Play Store ary isa naoty kintana 4.1 misy tsikera maherin'ny 100 sy naoty tsara. Azonao atao ny mangataka ny fanampian'ny fashionistas sy ny mpamorona hanasongadinana ny fitiavanao amin'ny fomba tsara ary hahatonga anao ho tsara tarehy.
Mandritra izany fotoana izany dia afaka mamorona fanangonana lamaody nataonao kintana ianao. Mamorona, mamolavola ary mamorona menaka manitrao miaraka amin'ny fitomboka manokana ary tonga tena megastar miaraka amin'ireo mpankafy an'arivony eo amin'ny tontolon'ny sarimihetsika. Azonao atao ihany koa ny miaina fiainana manankarena - mifanerasera sy mihaona amin'ireo olo-malaza rehefa mitsidika toerana toa an'i Beverly Hills, Manhattan, ary Las Vegas, ankoatry ny hafa. Etsy ankilany, mitifitra sy mandefa horonantsary izy; afaka lasa malaza kokoa amin'ity lalao ity ianao noho ny efa anao.
Developer: Lalao Frippa
Tantara Hollywood: lamaody ikona
Raha ny nofinofisinao dia ny mametraka sarimihetsika mena amin'ny karipetra mena any Hollywood ary ho iray amin'ireo olo-malaza faran'izay kanto indrindra amin'ny tanàna sarimihetsika manintona indrindra eto an-tany, miaraka amin'ity lalao ity ianao dia afaka mahatratra azy. Tonga mpilalao sarimihetsika na andriambavy kilasy voalohany ary manatrika hetsika avo lenta miaraka amin'ny olona malaza, fa tsy hoe tsy manao akanjo mihaja sy lafo vidy indrindra amin'ny rehetra mahita anao tsara sy mamiratra.
Avelao ny mpaka sary sy ny paparazzi hanao ny asany ary hisambotra amin'ny antsipiriany ny zavatra hitanao amin'ny fety galas sy ny sarimihetsika ary ny première premier. Manana akanjo sy kojakoja be dia be ianao hahatonga ny fombanao ho mamiratra sy mahavariana indrindra amin'ny alina manontolo. Mangalà ny sain'ny mpanao gazety amin'ny hatsaranao.
Fanaviana nahandro - Lalao Chef
Ny firehetam-po amin'ny zavakanto mahandro sy mahandro sakafo dia zavatra betsaka kokoa omena ny ankizivavy noho ny ankizilahy, amin'ny ankapobeny. Izany indrindra no antony amin'ity lahatsoratry ny lalao tovovavy tsara indrindra ho an'ny Android ity kilalao chef tsy ho very.
Amin'ity lalao ity dia mila mampifaly ny lanilaninao isan-karazany ianao. Ny mpanjifa tonga any amin'ny trano fisakafoanana dia mitaky be loatra, noho izany dia mila manomana ny fomba fahandro araka izay tratra ianao. Afaka mahandro ny zava-drehetra ianao, manomboka amin'ny lovia lafo vidy ka hatramin'ny sakafo matsiro mankany amin'ny tsindrin-tsakafo sy zava-mamy mahafinaritra. Misy lovia sy fomba fahandro maherin'ny arivo izay azonao atao amin'ny sakafo Cooking Fever - Chef Game. Avy amin'ny tsotra indrindra ka hatramin'ny be pitsiny indrindra izy ireo.
Azonao atao ny misafidy ireo toerana hanaovanao ny asanao chef. Misongadina amin'ny toerana kely na amin'ny trano fisakafoanana lehibe sy mihaja. Izy ireo dia mety ho Indiana, Sinoa na avy amin'ny kolontsaina gastronomika hafa eto amin'izao tontolo izao. Ataovy ho anao izy ireo ary haingo azy araka izay itiavanao azy. Ataovy mahazo aina ny mpanjifanao amin'ny toeranao ary omena serivisy ambony. Mazava ho azy, mifantoha amin'ny fandresena ireo ambaratonga misy: izy ireo dia mihoatra ny 1.000, ny iray sarotra kokoa noho ny iray hafa. Ampiasao ny teknikan'ny culinary anao handresena azy ireo ary hanome satroboninahitra ny tenanao ho chef tsara indrindra eto an-tany.
Ity lalao ity dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny Play Store, ary tsy ny karazany fotsiny, fa ny sokajy rehetra, satria manana mihoatra ny 100 tapitrisa ny fisintomana ary ny isa misy kintana 4.3 izay mifototra amin'ny 4 tapitrisa sy ny salantsalany fanehoan-kevitra sy fanamarihana tsara ao amin'ny magazay Google ho an'ny Android.
Developer: North Current
Cooking City - lalao fisakafoanana sy fandrahoan-tsakafo
Manohy ny lalao fandrahoan-tsakafo, manana Cooking City izahay - trano fisakafoanana sy lalao fandrahoan-tsakafo, lohateny iray hafa izay, na dia mety ho an'ny zazalahy aza, ity tovovavy ity dia mikendry ny fotoana. Eto ianao dia afaka mahandro sy manomana ny zava-drehetra manomboka amin'ny sakafo junk ka hatramin'ny lovia faran'izay tsara miaraka amina fanomanana sarotra.
Afaka manendasa fomba fahandro mahandro sy mofomamy matsiro ianao. na dia, manaova kafe ary tsara daholo izay azonao eritreretina. Saika tsy misy fetra satria amin'ity lalao ity dia tsy maintsy mahandro lovia avy amin'ny lafivalon'ny tany ianao, manomboka amin'ny mahazatra indrindra amin'ny firenena tsirairay ka hatrany amin'ny tsy fahita firy sy mihoapampana.
Tahaka ireo lalao hafa amin'ity lahatsoratra fanangonana ity, ny Cooking City - ny trano fisakafoanana sy ny sakafo fandrahoan-tsakafo dia tsy mila fifandraisana Internet hilalaovana, hahafahanao mahandro amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Misy fotoana foana hampifaliana ny fisakafoanana sy ny mpanjifa. Cook burger, waffles, fries, pizza, ary karazan-junk sy sakafo tsy mahasalama rehetra Na kosa, mahandro sakafo sakafo mety tsara hitazomana ny fahasalamana. Misy recette sy safidy an-jatony hanomanana. Afaka miovaova foana ianao.
Amin'ny lafiny iray, Misy ambaratonga mihoatra ny 300 izay tsy maintsy fenoina mba ho chef tsara indrindra eto an-tany. Amin'ny voalohany dia tena mora izy ireo, saingy sendra zava-tsarotra sy sakana izay misy ny timers hahatonga ny fiomananao hazakazaka mifanohitra amin'ny fotoana. Ataovy lafatra ny fombanao ary ataovy haingana araka izay tratranao.
Hanana ny fitaovana, kojakoja rehetra ary izay rehetra ilainao handrahoana azy rehetra ianao, ary koa akora vaovao sy avo lenta, ary ny fomba fahandro tsirairay izay misy tsindrin-tsakafo sy lovia tsara. Mandritra izany fotoana izany dia afaka miasa amin'ny trano fisakafoanana mihoatra ny valo ianao ary lasa malaza amin'ny tontolon'ny sakafo.
Cooking City - lalao fisakafoanana sy fandrahoan-tsakafo dia lohateny lehibe iray hafa ary iray amin'ireo lalao fandrahoan-tsakafo tsara indrindra ao amin'ny Play Store, ka izany no ampidirinay ao anatin'ity fanangonana ny lalao tsara indrindra ho an'ny zazavavy amin'ny Android ity.
Developer: MAGIKA SEVEN
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao tovovavy 6 tsara indrindra ho an'ny Android
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny Android taloha
Google dia mamarana ny format APK amin'ny volana Aogositra mba hanome lalana ny AAB